#3Apartment Colibri & A/C - I-Airbnb
Indawo yethu yabucala ibekwe imizuzu kude kuzo zonke iindawo ezinomtsalane eLa Fortuna (Iindawo zemithombo eshushu: iikhilomitha ezi-2, i-waterfall yaseLa Fortuna: i-4 km, idolophu: i-1 km, intambo yokuqubha i-El Salto: i-4 km kunye nepaki yeSizwe: i-10 km). Igumbi elihle kwaye likhululekile, i-WIFI ethembekileyo kunye nendawo yokupaka evaliweyo yemoto yakho. Indawo egqwesileyo, ikhitshi, indawo yokuqubha, indawo yokuhlala ekhuselekileyo kufutshane nevenkile ezinkulu, iibhari, indawo yokuhlamba impahla kunye neendawo zokutyela ezikumgama nje weemitha ezili-100. Indawo yakho efanelekileyo yokuhlola iArenal.
Indawo enefenitshala epheleleyo, ekwiikhilomitha ezi-2 ukusuka eLa Fortuna edolophini kunye neekhilomitha ezi-3 ukuya kwimithombo eshushu, kufutshane neendawo zokutyela, iindawo ezinomtsalane eziphambili kunye nezikhumbuzo.
IApartment ifumaneka ngaphantsi kwemizuzu emi-5 ukusuka eLa Fortuna edolophini (eyona dolophu ikufutshane neArenal Volcano). Kude nezitrato ezinengxolo kodwa kwangaxeshanye kufutshane nazo zonke iindawo ezinomtsalane (imithombo eshushu, iingxangxasi, iiPaki zeSizwe, iiBridges ezijingayo zaseMistico, njl..)
*Ibhedi enkulu eyi-Queen.
*Igumbi lokuhlambela eli-1 eligcweleyo langaphakathi elineshawa kunye namanzi ashushu.
*Imeko yomoya, iFlat T.V.&Satelital Cable.
* Uqhagamshelo kwi-Intanethi ngeWifi.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (ifriji, imicrowave, iBlender, umenzi weKofu, iskipa sombane, isipheki serayisi...
* Iqula lokuqubha ekwabelwana ngalo kunye nendawo yeBBQ.
4.78 · Izimvo eziyi-335
Izimvo eziyi-2 946